Mitondra Soa Mandrakizay ny Nitsanganan’​i Jesosy!
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Aymara Boligara Catalan Cebuano Chichewa Cinghalais Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Frantsay Ga Grika Groenlandey Guarani Géorgien Hiligaynon Holandey Hongroà Ibo Iloko Indonezianina Iokrenianina Italianina Japoney Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Koreanina Kreôla any Haïti Kroaty Kwangali Letonianina Litoanianina Luo Malagasy Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Norvezianina Nzema Oromo Poloney Portogey Quechua (Bolivia) Romanianina Rosianina Sepedi Serba Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Tagalog Tailandey Tigrigna Tiorka Tseky Tsonga Twi Vietnamianina Wayuunaiki Xhosa Yorobà Zoloa Éwé
Mitondra Soa Mandrakizay ny Nitsanganan’i Jesosy!
TSY tantara fotsiny ny nitsanganan’i Jesosy tamin’ny maty fa tena mahasoa antsika ankehitriny. Nanazava ny soa horaisintsika ny apostoly Paoly, hoe: ‘Efa natsangana tamin’ny maty tokoa i Kristy, izay voaloham-bokatra amin’ireo nodimandry. Koa satria olona iray no niavian’ny fahafatesana, dia olona iray koa no iavian’ny fitsanganan’ny maty. Fa tahaka ny ahafatesan’ny rehetra ao amin’i Adama, no hamelomana ny rehetra koa ao amin’i Kristy.’—1 Korintianina 15:20-22.
Tamin’ny 16 Nisana taona 33 i Jesosy no natsangana. Nankany amin’ny tempoly tany Jerosalema ny Jiosy isaky ny 16 Nisana, mba hanao fanatitra ho an’i Jehovah. Ny voaloham-bokatry ny taniny no nentin’izy ireo tamin’izany. Matoa àry i Paoly nilaza fa voaloham-bokatra i Jesosy, dia mbola hisy olon-kafa hatsangana amin’ny maty koa ao aoriany.
Misy soa hafa koa noresahin’i Paoly. Hoy izy: “Satria olona iray no niavian’ny fahafatesana, dia olona iray koa no iavian’ny fitsanganan’ny maty.” Maty daholo isika satria nandova ota avy tamin’i Adama. Nanao sorona ny ainy lavorary anefa i Jesosy, ka afaka manantena ny hatsangana izay olona maty. Ho afaka amin’ny ota sy fahafatesana izy ireo amin’izay. Hoy i Paoly ao amin’ny Romanina 6:23: “Fahafatesana no tambin’ny ota, ary fiainana mandrakizay amin’ny alalan’i Kristy Jesosy Tompontsika kosa no fanomezana omen’Andriamanitra.”
I Jesosy mihitsy no nanazava ny soa horaisintsika noho izy maty ho antsika sy natsangana tamin’ny maty. Hoy izy momba ny tenany: ‘Tsy maintsy hasandratra ny Zanak’olona, mba hahazo fiainana mandrakizay izay rehetra mino azy. Fa lehibe tokoa ny fitiavan’Andriamanitra an’izao tontolo izao, ka nomeny ny Zanany lahitokana mba tsy ho ringana izay rehetra maneho finoana azy, fa hanana fiainana mandrakizay.’—Jaona 3:14-16.
Alao sary an-tsaina ange ny fiainana amin’ny hoavy e! Tsy hisy intsony ny aretina sy ny fijaliana ary ny alahelo. (Apokalypsy 21:3, 4) Tena hahafinaritra tokoa izany! Hoy ny manam-pahaizana iray: “Rehefa mahita fasana ny olona, dia mety hahatsiaro fa fohy ny andro iainany. Ny fitsanganana amin’ny maty kosa manome toky fa fohy ny fotoana ahafatesana.” Mitondra soa mandrakizay tokoa ny nitsanganan’i Jesosy tamin’ny maty!